बिमाप्रति बढ्दो विश्वास
२०७६ जेठ ३० बिहीबार १५:४२:००
वित्तीय प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको बिमा क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं प्रवद्र्धनमा काम गर्दै नियमनकारी निकाय बिमा समिति गत बुधबार ५१औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो सुखद कुरा हो । र पछिल्ला दशकमा यसले खेलेको भूमिका पनि उदाहरणीय रहेकामा गर्व महसुस हुन्छ । दिनदिनै क्षेत्र विस्तार हुँदै छ । बिमा कम्पनीहरूको पहुँच बढ्दै छ । साथै बिमा व्यवसाय पनि वृद्धि भएको छ ।
खुसीको कुरा हो कि विश्व बजारमा बिमा क्षेत्र अपेक्षाभन्दा तीव्र गतिमा बढेको छ । नेपालमा पनि त्यो हावाले नछोएको होइन । विश्वमा सन् २०१६ को तुलनामा २०१७ मा बिमाशुल्क ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशतले वृद्धि भयो । कारोबार ४८ खर्ब ९ अर्ब डलर थियो । कारोबारमा एसिया अगाडि देखिन्छ । बिमाशुल्क संकलन वृद्घिदर सात प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम वृद्घिदर ओसेनियाको १ दशमलव ४१ प्रतिशत छ । विश्व बिमा बजारमा क्षेत्रगत अधारमा अमेरिका अगाडि छ । जुन ३४ दशमलव ३६ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, बिमा क्षेत्रले युरोपमा सबैभन्दा बढी ६ दशमलव ४५ प्रतिशतका दरले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पु¥याएको देखिन्छ । सबैभन्दा कम अफ्रिकामा २ दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र योगदान छ ।
नेपालमा बिमाको योगदान ३ प्रतिशत
बितेको वर्ष मुलुकको वित्तीय प्रणालीका ३ वटै क्षेत्रहरू बैंकिङ, बिमा र धितोपत्र बजार अत्यधिक चलयमान रहे । मुख्य समाचारको विषय बनिरहे । बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा तालमेल मिलाउन नसक्दा वर्षैभरि ‘क्रेडिट क्रन्च’ भइरह्यो । धितोपत्र बजारअन्तर्गत वर्षको सुरुमा १ हजार ८ सयको हाराहारीमा रहेको नेप्से सूचक चैत आइपुग्दा १ हजार २ सयमा झ-यो । वित्तीय प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र बिमा व्यवसायको भने उत्साहजनक कार्य रह्यो । इतिहासमै स्मरण गर्न लायक नतिजाका साथ अत्यन्तै सफल वर्षका रूपमा रहन गयो । ०७५ को सुरुमा १० प्रतिशत नागरिकमा बिमा सीमित थियो । ०७५ फागुनसम्म १७ दशमलव ६ प्रतिशत नाघ्यो ।
बिमा समितिको प्रक्षेपणअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा बिमाको पहुँच करिब २० प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बिमा क्षेत्रको योगदान पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ । अघिल्लो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बिमाको योगदान २ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत थियो । ०७५ सालको असार मसान्तसम्म आइपुग्दा २ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्यो । हाम्रो प्रक्षेपणअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बिमाको योगदान ३ प्रतिशत पुग्नेछ ।
यस वर्ष नेपाली बिमा क्षेत्रको विकासका लागि केही महत्वपूर्ण संस्थागत तथा कानुनी सुधार भए । यसले सर्वसाधारणको बिमाप्रतिको विश्वास बढाउने काम ग¥यो । यसको विस्तार पनि निकै उत्साहप्रद देखिन्छ । कम्पनीहरू गाउँ जान थालेका छन् । निष्क्रिय बसेका कम्पनीहरू सक्रिय भएका छन् । कम्पनीहरूमा भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ । भुक्तानी सहज बन्दै छ । यसले बिमाप्रति विश्वास पनि बढ्दोे छ ।
४० अर्ब बिमाशुल्क संकलन
हाल जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्या १९ पुगेको छ । ०७५ फागुनसम्ममा सबै जीवन बिमा कम्पनीमार्फत कुल ६० लाख ३० हजार बिमालेख बिक्री भयो । त्यसमध्ये करिब १ लाख ४६ हजार वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा छ । यसै अवधिमा जीवन बिमा कम्पनीले ४० अर्ब बिमाशुल्क संकलन गरे । पछिल्ला वर्षहरूमा जीवन बिमा कम्पनीको खुद मुनाफा, वार्षिक बिमाशुल्क, जारी बिमालेख संख्या र लगानी लगातार बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा जीवन बिमा कम्पनीहरूले समितिबाट १ सय ७ बिमालेख स्वीकृत गराएका थिए ।
अघिल्लो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बिमाको योगदान २ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत थियो । ०७५ सालको असारसम्म आइपुग्दा २ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्यो । चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बिमाको योगदान ३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।
निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्या २० छ । ०७५ साल फागुन मसान्तसम्ममा सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीमार्फत कुल १३ लाख ३८ हजार बिमालेख बिक्री भयो । यसै अवधिमा निर्जीवन बिमा कम्पनीले १४ अर्ब बिमाशुल्क संकलन गरे । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको नाफामा र दाबी भुक्तानी पछिल्ला वर्षहरूमा उतार-चढाव हुँदै वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ४८ बिमालेखहरू स्वीकृत गराएका थिए ।
कृषिमा नयाँ-नयाँ बिमालेख
चालू आर्थिक वर्षमा कृषितर्पm धेरै नयाँ खालका बिमालेख जारी गरेका छौँ । यो वर्ष मात्रै नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा चिया, कफी र बाख्रा बिमालेख जारी गरियो । केही बिमालेख परिमार्जन पनि गरेका छौँ । जस्तै, माछा बिमालेख परिमार्जन ग-याैं । आगामी दिनमा सुन्तला र कागती बिमालेख जारी गर्ने क्रममा छाैं । बिगतमा लागतमा आधारित कृषि बिमालेखहरू जारी गरिन्थ्यो । गत वर्षदेखि उत्पादनमा आधारित बिमालेख तयार गरेका छाैं ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक कृषिमार्फत उत्पादकत्व वृद्धिका साथै स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कृषि बिमामा अनुदान दिँदै आएको छ । हालको नीतिअनुसार बिमाशुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने र बाँकी २५ प्रतिशत कृषकले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बिमांकको ५७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क थियो । त्यसमध्ये सरकारबाट ४३ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनुदान आयो । चालू आर्थिक वर्ष फागुन मसान्तसम्ममा ९ खर्ब ११ अर्ब बिमांकबराबरको ४२ करोड बिमाशुल्कमध्ये ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने क्रममा छ ।
बिमकको नियमित निरीक्षण र सुपरिवेक्षण
हाम्रो चुनौतीमध्ये एक हो, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण । बिमकहरूले समितिबाट जारी नीति, निर्देशन, मार्गदर्शन र परिपत्रलगायत सञ्चालक समितिबाट जारी गरेका नीतिहरूको परिधिभित्र रही कार्य गरेका छन्–छैनन् ? वित्तीय रूपमा स्वस्थ छन–छैनन् ? बिमितको हित संरक्षण भएको छ/छैन ? भन्ने सुनिश्चितताका लागि नियमित निरीक्षण र सुवरिवेक्षण गर्दै आएका छौँ । समितिले बिमकको निरीक्षणका क्रममा स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेको छ । समितिको गैरस्थलगत शाखाले बिमकहरूबाट प्राप्त सूचना, जानकारी एवं विवरणहरूको वित्तीय विश्लेषण गर्ने गर्छ । आव ०७४/७५ को अन्त्यतिर सम्पूर्ण बिमकहरूलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरणका साथै वित्तीय अनुपातहरू पेस गर्ने गरी निर्देशन दिएका छाैं । समितिले बिमकहरूबाट प्राप्त वित्तीय अनुपातहरूको आवधिक परीक्षण गर्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा वित्तीय अनुपातहरूको ‘बेन्च मार्किङ’ गर्ने काम पनि सुरु गरेका छाैं ।
जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्न समितिबाट गैरस्थलगत रिपोर्टिङ दिग्दर्शन तयार गर्ने कार्य सञ्चालन गरेका छाँै । समितिले आव ०७५÷७६ को फागुन मसान्तसम्म १५ बिमकको परिपालनामा आधारित समष्टिगत सुवरिवेक्षण र १२ बिमकको विषयगत आकस्मिक स्थलगत निरीक्षण ग-यौँ ।
बिमकमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान लागू
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)ले गत आव ०७३/७४ देखि बिमा कम्पनीहरूमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) लागू गर्न निर्देशन गरेको थियो । त्यतिवेला आवश्यक तयारी गर्न सकिएन । त्यसैकारण एनएफआरएस लागू गर्न सकिएको थिएन । यसबाट समिति, बिमा कम्पनी र समग्र बिमा क्षेत्रबारे आलोचना हुँदै आएको थियो । सामान्यतया वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत बुझ्ने लेखाको साझा भाषाका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमान नेपालमा पनि लागू गर्ने राज्यको प्राथमिकतामा छ ।
यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी गत आव ०७४/७५ देखि सम्पूर्ण बिमा कम्पनीहरूले समितिले जारी गरेको बिमकको वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशन ०६५ बमोजिम बनाइएको वित्तीय विवरणका साथै एनएफआरएसअनुरूपको वित्तीय विवरणसमेत समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छाैं । पहिलोपटक एनएफआरएसअनुरूप वित्तीय विवरण बनाउँदा व्यावहारिक कठिनाइ र द्विविधा हुन्छ नै । त्यसले गर्दा बिमा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वित्तीय विवरण अन्य वर्षहरूमा भन्दा केही ढिलो गरी पेस गरे । वित्तीय विवरण पेस गर्न बाँकी कम्पनीहरूलाई समेत समयसीमा तोकेर निर्देशन दिइसकेका छौँ ।
इजी ट्याक्सी नेपाल एपले ११ हजार ट्याक्सीचालकको कोरोना बिमा गरिदिने
धनकुटामा पहिलोपटक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु
काभ्रेका साढे सात सय स्वास्थ्यकर्मीको कोरोना बिमा गर्न रकम सहयाेग
बागमती प्रदेशमा क्रियाशील सात सय पाँचजना पत्रकारको कोरोना बिमा
कोरोना नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूको एक करोडको बिमा हुनुपर्ने कांग्रेसको माग
कोरोना मिटर : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमणमुक्त भए
पहिरोको त्रास : संखुवासभामा पहिरोले आठ घर बगायो, ११ जना बेपत्ता, तीनको उद्दार